ओमकार टाइम्स वास्तु अनुसार कस्तो तस्बिर घरमा राख्न हुँदैन ? पितृको तस्बिर कता राख्ने ? | OmkarTimes.com – OMKARTIMES
वास्तु अनुसार कस्तो तस्बिर घरमा राख्न हुँदैन ? पितृको तस्बिर कता राख्ने ? | OmkarTimes.com
काठमाडौं । युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारि पछिल्लो समयका चर्चित ज्योतिष हुन् । धर्म र ज्योतिषका कुरालाई वैज्ञानिक कारण संग प्रष्ट पार्ने भएका कारण पनि उनको लोकप्रियता बढेको हो । उनले घरमा राखिने चित्रहरुको विषयलाई लिएर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।
ज्योतिष हरिहर अधिकारिका अनुसार पितृको तस्बिर सधै दक्षिण दिशामा राख्नुपर्छ । परिवारका जीवित व्यक्तिहरुको तस्बिर पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ । जीवित व्यक्तिहरुको तस्बिर कहिल्यै पनि दक्षिण दिशामा राख्न नहुने उनी बताउँछन्।
नकारात्मक दृश्यहरुले व्यक्तिमा नकारात्मक तरंग प्रवाह गर्छ । त्यसैले घरमा नकारात्मक संदेश दिने खालका चित्रहरु राख्नु हुँदैन । अधिकारीका अनुसार, घरमा युद्धका चित्रहरु, काटमारका चित्रहरु धार्मिक नै भएपनि राख्नु हुँदैन । ती चित्रहरुले व्यक्तिमा नकारात्मक तरंग उत्पन्न गरिदिन्छ।
झापामा फेरि एक महिलाकाे हत्या
बालाचतुर्दशीका दिन घरआँगनमै सत्बीज छर्न अर्जुनधारा जलेश्वरधाम समितिको आग्रह
उर्लाबारीबाट ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सैन्य लडाकु पेस्तोलसहित पक्राउ
कक्षा १२ को परीक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा
शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा, द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्याय पाएनन्